Posted by Tranquillus | Feb 1, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Amin'ny ankapobeny, ny teny hoe "miala" dia midika fa fanomezan-dàlana hampiatoana ny asa omen'ny mpampiasa ny mpiasa. Ireto tsipika manaraka ireto dia manolo-kevitra izahay ny hampahafantatra anao ny hafa karazana mamela ary koa ny fizotrany samihafa.
Alàlana mandoa vola dia ny fotoana fialan-tsasatra izay anaovan'ny mpampiasa azy, noho ny adidy ara-dalàna. Ny mpiasa rehetra dia manan-jo amin'izany, na inona na inona karazana asa na hetsika ataon'izy ireo, ny fahazoan-dàlana azy, ny sokajy misy azy ireo, ny toetran'ny tambin-karama sy ny fandaharam-potoan'izy ireo. Na izany aza, na dia voatokana amin'ny firenena maro aza izy ireo, ny isan'ireo fety andoavam-bola dia miovaova isaky ny firenena. Na izany aza, any Frantsa, ny mpiasa rehetra dia manana alalana feno amin'ny 2 andro fialan-tsasatra andoavam-bolana. Raha tsorina dia ny mpiasa izay miasa tsy tapaka ho an'ny mpampiasa mitovy sy ny toeram-piasana mitovy amin'izany dia hahazo tombony amin'ny fialan-tsasatra karama.
MITADIAVAZAVANA NA AZO AZY
Raha miresaka momba ny fialan-tsasatra tsy misy karama isika dia manondro izay tsy fehezin'ny Code Code. Mba hahazoana tombony, ny mpiasa dia tsy fehezan-javatra sy fomba rehetra. Amin'ny teny hafa, amin'ny alàlan'ny fifanarahana iraisana no hamaritan'ny mpampiasa sy ny mpiasa ny faharetany sy ny fandaminana azy. Raha fintinina dia mety mangataka fialan-tsasatra tsy karama ny mpiasa iray noho ny antony maro samihafa. Noho izany dia malalaka ny fampiasana azy na ho an'ny tanjona matihanina (famoronana orinasa, fianarana, fiofanana sns ...) na ho an'ny tanjona manokana (fitsaharana, fiterahana, fitsangatsanganana, sns). Ho an'ny karazana fialan-tsasatra toy izany, amin'ny fotoana rehetra hahalany ny tsy hahalasa azy dia tsy ho voaloa ny mpiasa.
Araka ny lalàna mifehy ny asa, ny mpiasa rehetra izay nahavita herintaona mahomby dia mahazo fialan-tsasatra isan-taona. Ny fialan-tsasatra andoavam-bola dia dimy herinandro amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny, tsy manadino ny fety ampahibemaso sy ny faran'ny herinandro omen'ny mpampiasa. Mazava ho azy fa nomena alalana isan-taona mifanaraka amin'ny lalàna ihany sy ny fandaharam-potoanan'ny orinasa. Raha tsorina dia misy mpiasa, na inona na inona asany, omeny ny asany, ny ora fiasany afaka mandray soa avy amin'ity fialana ity.
HAMAKY Coronavirus sy hetsika ampahibemaso, 84% amin'ny karamanao no homena anao.
Ny fialan-tsasatra amin'ny fanadinana, araka ny anarany, dia fombafomba manokana izay omena, rehefa omena fotoana iray, dia omena mpiasa tsirairay ny tsy hisian'izy ireo mba hiomanana amin'ny fanadinana iray na mihoatra. Mba hahazoanao tombontsoa amin'ity fialan-tsasatra ity, ny mpiasa manana ny fahazoan-dàlana / diplaoman'ny fampianarana teknolojia nankatoavina dia tsy maintsy manaporofo mafy ny zokiolona 24 volana (2 taona) ary manana ny kalitaon'ny mpiasa ao amin'ny orinasa mandritra ny 12 volana (1 taona). Na izany aza, tsara ny mahafantatra fa ny mpiasa iray ao amin'ny orinasa mpanao asa tanana izay tsy latsaky ny 10 dia tsy maintsy manaporofo fahanterana 36 volana.
FIVORIAN-TENY VIVAVY FIVORIANA
Iray amin'ireo fiofanana izay azon'ny mpiasa ankafiziny na amin'ny CDI na CDD iray. Noho ity fialan-tsasatra ity dia afaka manaraka fotoam-piofanana iray na maromaro ny mpiasa rehetra. Raha fintinina dia ity dia na (misy) fampiofanana izany dia hahafahan'izy ireo hahatratra ny ambaratonga avo lenta kokoa amin'ny mari-pahaizana ho matihanina na hanome azy ny fivoarana isan-karazany amin'ny fampiharana ny andraikiny ao anatin'ny orinasa.
MANDROSA NY EKONOMENIKA, ny Sôsialy ary ny FIVORIANA ANARANA
Ny fialan-tsasatra amin'ny fiofanana ara-toekarena, ara-tsosialy ary firaisana dia karazana fialan-tsasatra omena ny mpiasa tsirairay izay te handray anjara amin'ny fampiofanana ara-toekarena na sosialy na fanatanjahantena sendika. Ity fialan-tsasatra ity amin'ny ankapobeny dia omena tsy misy fepetra ho an'ny zokiolona ary ahafahan'ny mpiasa miomana hanao fanatanjahantena amin'ny asan'ny sendika.
FAMPIANARANA SY FANAMBARANA
Ny fialantsasatra amin'ny fampianarana sy ny fikarohana dia karazana fialan-tsasatra izay manome ny mpiasa rehetra fahafaha-mampianatra na manohy (manohy) ny asa fikarohana isan-karazany na amin'ny andrim-panjakana na miankina amin'ny fanjakana. Mba hahazoana tombony amin'izany, ny mpiasa aloha dia tsy maintsy manana ny fankatoavan'ny mpampiasa azy ankoatry ny fanajana ny fepetra sasany. Ny fialan-tsasatra fampianarana sy fikarohana dia maharitra eo ho eo:
-8 ora isan-kerinandro
-40 ora isam-bolana
-1 taona feno.
Iaraha-mahalala fa ny fehezan-dalàna momba ny asa sy ny fifanarahana ifanaovana dia nametraka fialan-tsasatra narary. Midika izany fa raha misy aretina voamarina amin'ny taratasy fanamarinana ara-pitsaboana, ny mpiasa iray, na inona na inona toe-javatra misy azy (mpihazona, mpiofana, vonjimaika), dia manan-jo hanana fialan-tsasatra "mahazatra". Ny faharetan'ity fialan-tsasatra ity dia manapa-kevitra ny dokotera miankina amin'ny tranga hitsaboana azy.
Mba hahazoana tombontsoa amin'ny fialam-boly marary dia tsy maintsy mandefa ny mpampiasa azy ny mpiasa amin'ny fiatoana ny asa na ny mari-pahaizana momba ny fitsaboana mandritra ny 48 ora voalohany.
Ankoatr'izay, raha mahita ny tenany fa voan'ny aretina mafy sasany ny mpiasa, dia matetika izy no manome alalana ny CLD (fialantsasatra maharitra). Ity farany dia ekena taorian'ny fanarahana ny hevitry ny komity mpitsabo ary afaka maharitra hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 8 taona.
Ny vehivavy miasa rehetra dia mahazo alalana amin'ny fiterahana. Ity fialana ity dia misy ny fialan-tsasatry ny prenatal sy ny fialan'ny postnatal. Ny fialan-tsasatra amin'ny prenatal dia maharitra 6 herinandro alohan'ny fotoana (averina) daty fanaterana azy. Raha ny fialana aorian'ny postnatal dia maharitra 10 herinandro aorian'ny fanaterana. Na izany aza, miovaova ny faharetan'ny fialan-tsasatra raha toa ka efa niteraka zaza 2 farafaharatsiny ny mpiasa.
MITADIAVA AZONAO FIVORIANA ENTANA
Ny fialan-tsasatra amin'ny fametrahana orinasa dia karazana fialan-tsasatra izay manome ny mpiasa mety hanana fialan-tsasatra na mandany tapa-potoana mba hahafahany mametraka tsara amin'ny tetikasan'ny mpandraharaha. Amin'ny teny hafa, ity fialan-tsasatra ity dia manome ny mpiasa ny zon'ny hanafoanana vetivety ny fifaneken'ny asa mba ahafahana mamorona asa manokana, fambolena, varotra na asa tanana. Tonga lafatra noho izany ny mpitondra tetikasa manana hevitra hanombohana soa aman-tsara. Ny fialan-tsasatra amin'ny famoronana orinasa dia ahafahan'ny mpiasa mitantana orinasa vaovao vaovao ihany koa mandritra ny fotoana voafaritra.
Ny mpiasa izay maniry hahazo tombony amin'ity fialan-tsasatra ity dia tsy maintsy ho zokiolona 24 volana (2 taona) na mihoatra ao amin'ny orinasa iasany. Ny fialan-tsasatra amin'ny famoronana orinasa dia manana maharitra maharitra 1 taona indray mandeha. Na izany aza, tsy voaloa tanteraka izy.
MITADIAVA NY FAHAGAGANA VAVAKA
Ny fialan-tsasatra amin'ny loza voajanahary dia fialan-tsasatra manokana izay azon'ny mpiasa mahafaly amin'ny fepetra sasany. Eny tokoa, omena alalana amin'ny mpiasa rehetra mipetraka na miasa tsy tapaka ao amin'ny faritra mampidi-doza izany fahazoan-dàlana izany (faritra mety hiharan'ny loza voajanahary). Noho izany dia mamela ny mpiasa hanana mandritra ny 20 andro izay hahafahany mandray anjara amin'ny hetsika ataon'ny fikambanana manome fanampiana ny traboina amin'ireto loza ireto. Tsy mahazo valiny izany satria raisina an-tsitrapo izany.
Teo alohaMiaraha miasa amin'ny ekipa ary miasa miaraka amin'ny Slack. Mifampiresaka amin'ny tena fotoana
manarakaOhatra ny mailaka hangataka fialan-tsasatra raha tsy misy karama.